မသီတာထွေးအားသတ်ဖြတ်သူ ကုလား ၂ ကောင်အား ကြိုးမိန့်ပေးရန် ကျောက်ဖြူမှ စစ်တွေသုိ့ခေါ်ဆောင် ~ Myanmar Express
မသီတာထွေးအားသတ်ဖြတ်သူ ကုလား ၂ ကောင်အား ကြိုးမိန့်ပေးရန် ကျောက်ဖြူမှ စစ်တွေသုိ့ခေါ်ဆောင်
From : ကိုဖြူမသီတာထွေးအမှု ကျူးလွန်သူ တရားခံနှစ်ဦးအား ဇွန်လ ၁၉ရက်နေ့က အမိန့်ချမှတ်လိုက်ပြီး ၄င်းတရားခံနှစ်ဦးအား ကျောက်ဖြူမှ စစ်တွေသို့ ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ဇွန်လ ၁၉ရက်နေ့က ကျောက်ဖြူတရားရုံးတွင် မသီတာထွေးအမှုနှင့်ပက်သက်၍ တရားခံ မာမတ်ရော်ဖီး (ခ) လှဝင်း နှင့် လူလု(ခ)ခေါ်ချီး(ခ)မြင့်ဆွေ(အဖြူ) တို့အား ပုဒ်မ ၃၇၆(မုဒိမ်မှု)၊၃၉၂(လုယက်မှု)၊၃၀၂/၁(၈)(မသေမချင်းသတ်မှူ) တို့ကိုကျူးလွန်သည့်အတွက် ၃၂၀(၁)(ဂ) အရ သေဒဏ်ချမှတ်လိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။“သူတို့နှစ်ယောက်ကို ကျောက်ဖြူတရားရုံးက သေမိန့်ချလိုက်ပြီး၊ အယူခံဝင်ခွင့် ၇ရက်ပေးထားတယ်။ ဒီနေ့ ကျောက်ဖြူ-စစ်တွေ လေယဉ်ခရီးစဉ်နဲ့ ကျောက်ဖြူကနေ စစ်တွေကို နေ့လည်ဘက် ၂း၃၀ နာရီမှာ ခေါ်ဆောင်သွားပြီ၊ ၇ရက်အတွင်း အယူခံမ၀င်ဘူးဆိုရင်တော့ စစ်တွေမှာဘဲ ကြိုးမိန့်ပေးမယ်ထင်တယ်”ဟု ကျောက်ဖြူ လူငယ်တစ်ဦးမှ ပြောပြသည်။၄င်းတရားခံ နှစ်ဦးအား ကျောက်ဖြူမှ စစ်တွေသို့ ခေါ်ဆောင်သွားရန်ရှိသဖြင့် ကျောက်ဖြူ-စစ်တွေ လေယဉ်ဖြင့် လိုက်ပါမည့် ခရီးသည်များမှာ လိုက်ပါခွင့်မရခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ စစ်တွေလေဆိပ်တွင် စစ်ကား ၃စီးဖြင့် လုံခြုံရေးယူထားပြီး၊ လေဆိပ်အတွင်းသို့ မည်သူမှ ၀င်ခွင့်မရကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။Myanmar Express
ရခိုင်မှာရှိတဲ့ခွေး ကုလားတွပါ အကုန်လုံး သေဒဏ် ပေးလိုက်ပါလား
မ သီ တာ ထွေး အသက်ခံရသလိုဘဲ မသေမချင်း မဒိန်းကျင့်ပြီး ဓါးနဲ့ထိုးသတ်သငိ့သင့်ပါတယ်။
Rakhine people untied and beat and kill illegal Bangladesh muslim terrorists and killers. These illegal Bangladesh Muslim terrorists have Guns. Establish your own patriotic Rakhine army and kill all illegal Bangladesh Muslims in Rakhine state . Distribute the letters about danger of illegal Bangladesh muslims and Islam in Rakhine( Arakan ) state and gather tens of thousand of Rakhine and Myanmar people and destroy and burn all Muslim ( Islamic ) Koran books and Mosques and Muslim Villages and Muslim homes in Sittwe , Thandwe , Kyaukdaw , Rathedaung, Buthidaung, Maungdaw and other cities in Rakhine ( Arakan ) , Myanmar ( Burma) . Deport all illegal Bangladesh Muslims and Muslims to Bangladesh .
21 June 2012 00:58
21 June 2012 01:56
Very good. Lesson for inhuman , Barbarians , Monsters , Devils , Evils , Terrorist illegal Bangladesh Muslims who raped and killed Rakhine girls and Myanmar people . Execute them in front of Rakhine people and Myanmar people immediately.
21 June 2012 07:57
သိတာထွေးခံစားခဲ့ရသလို ဒင်းတို့ ခွေးကုလား ၂ကောင်ကို. ဖင်ထဲကို ဝါးချွန်နဲ့ ၇၈၆ ကြိမ်ထိုး၊ဝက်လိးကို ၇၈၆ ကြိမ်စုတ်ခိုင်း. ပြိးမှ လည်မြိုကို လှိးဖြတ်လို့ သတ်သင့်ပါတယ်
ီdo not mercy on Muslim and Cows. just kill them all. If Muslim in your country, they will be terrible..
21 March 2013 20:06
အဲ့ဒီခွေး ၂ ကောင်ိကို ဘယ်လိုသတ်လိုက်လဲ.. နောက် ပိုင်း ဘာသတင်းမှ့လဲ မကြားရပါ့လားးသတ်လိုက်တာမှ့ ဟုတ်၇ဲ့လားး..
5 May 2013 00:11
မူဆလိမ်ရှိသည့် နေရာတိုင်း ပြဿနာပေါင်း ထောင်သောင်းကုဋေ။မူဆလိမ်တိုင်း အဖျက်သမားမဟုတ်။ သို.သော် အဖျက်သမားတိုင်း မူဆလိမ်ဖြစ်သည်။